Emibhalweni emisha | Izincwadi Zamanje
UBelen | | Abalobi, Izaziso, Izinkondlo, Izindaba, eziningana
Kulezi zinsuku, kulezi zikhathi ebezihlasela thina, ezisizungezile, ezisiqondayo, izincwadi zithathe ukuphenduka okuhle, maqondana nalokho okwakuthathwa njengezincwadi zakudala.
Futhi kukude kakhulu nezothando, inoveli yomlando, iprozi yaseFrance (engiyithanda kakhulu), namuhla sithola izincwadi zombhali ezizungeze i-fascetas yomuntu neye-cybernetic.
Ababhali bazuza ukufinyelela komhlaba wonke ngokumane babe nebhulogi noma ikhasi lomuntu siqu abazothumela kulo. Futhi ngikuthatha njengokubaluleka okungakholeki, ngoba ubunzima lowo, njengomlobi, okufanele abhekane nabo lapho efuna ukushicilela umsebenzi oqediwe, awunazinqumo, kepha ikakhulu uma umbono ungewona wokushicilela incwadi ene-X okuqukethwe , kepha umane ufunde.
Ngithole ibhulogi ethakazelisa kakhulu, lapho umbhali wase-Argentina esebenza kanjalo. Ihlanganisa imibhalo yomuntu siqu, nezingcaphuno ezivela kubalobi besikhathi sonke, ngandlela thile abamele umbala webhulogi ngamazwi abo.
Ngikholwa ukuthi namuhla, ukubaluleka kweqiniso lobuciko emibhalweni, kungukufika okulula kulabo abafuna, abangakwazi, futhi noma ngabe kufanele babe ngabemukeli besenzo. Ngoba, ekugcineni, ingabe ubuciko akuyona indlela engcono yokusho okuthile?
Ngikushiya kuwe, futhi ngikumema kusuka kubhulogi engithathe kakhulu kulezi zinsuku. http://infimosurbanos.blogspot.com/
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » Emibhalweni emisha
I-Ylka -malalua- kusho
Siyabonga ngesincomo. Ngikhangwe yi-blog futhi isivele iphakathi kwezintandokazi zami. Lezi zinhlobo zamakhasi yizo okufanele uzifunde, yebo mnumzane, ngiyathanda ukuthi i-blogosphere ikhona.
Ukubanga okuningi kwemibhalo!
Phendula ku-Ylka -malalua-
damien debret viana kusho
Nkosazana; Ngikhubeka ngisebenzisa i-Internet ngenhlanhla ngamazwi akhe, futhi ngikhubekile ngokweqiniso. Ngabe ucabanga ngempela ukuthi le bhulogi imbi kangaka?
Noma kunjalo, ngingathanda ukuthi ungichazele ngesinye isikhathi, uma unesikhathi.
Phendula ku-damien debret viana
IDEBRET: Ngithanda ukuphawula ukuthi ucabanga ukuthi umsebenzi wombhali u-ANGELINA COICAUD DE COVALSCHI
Ukuhlaziywa okuhlakaniphile njengakho